Mayelana Cannapresso - Cannapresso Impilo Inc
CANNAPRESSO is a brand eziyingqayizivele zemvelo imikhiqizo CBD Hemp ezisekelwe waseCalifornia, ukunikela okusezingeni eliphezulu ukugxilisa ingqondo CBD ethathwe umkhakha Hemp, okuyinto ngokomthetho wonke amazwe angu-50.
Ziphathe aphakeme amafutha izinga CBD kusukela CANNAPRESSO, futhi ujabulele ukwazi ukuthi usebenzisa imikhiqizo Cannabidiol-zonke zemvelo, ekhishwe nge ikhemikhali-free CO2 ngenqubo aqede ukungcola kanye izinsimbi ezisindayo, kuyilapho kokuba amnene phezu eco-system. Zama okuthile okuhlukile nge ububanzi-uhla yethu imikhiqizo CBD ahlukahlukene ngenkathi tantalize ulithanda efihlekile izinketho okumnandi ukunambitheka!
Ningathemba CANNAPRESSO ukukunikeza isilinganiso esikahle eliphezulu uwoyela CBD wafaka e ongakhetha esihlwabusayo ukuthi uvumelane yokuphila kwakho. Umkhiqizo ngamunye CANNAPRESSO athwala ikhwalithi isiqinisekiso sokuthi Cannabidiol wakho lab-ihlolwe futhi wenza khona lapha, e-USA.
CANNAPRESSO Mkhiqizo umhlahlandlela